A toban sano ama laba sano ka hor, waxaa jiray sanduuq weyn oo jiray qolka kasta oo nool. Waxaan jeclaa oo si aan u daawado iyo browsed iyada oo channels yar in la heli. Maanta, sanduuqyada kuwa naftooda u badalay iyo laalaadaan ee derbiyada.
Qaabka aan u daawado TV ayaa isbedelay, sidaas ayaa ku barnaamijyadooda ka dhigi na sii qulquli videos ka PC in TV. TV ayaa hadda ku xiran internet oo way ka sii caqli badan keliya sanduuqa doqon ah. Waxaad si toos ah qulquli karaan video ka your computer in aad TV. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa TV waa in la DLNA shahaado sababtoo ah TV-ga waxa ay kala yihiin dhammaataan awood u helo il badan network. Halkan waxaan kala hadli doonaa sida la isticmaalayo VLC aan qulquli karo files warbaahinta in TV.
Laga soo bilaabo computer Windows
1. Si aad u billowdo hoorto, abuurtaan VLC on your computer. Tag menu oo taga si qulquli si ay u doortaan file warbaahinta in aad rabto in aad sii qulquli.
2. suuqa kala socda, waxaad u baahan doontaa in aad ku darto files aad rabto in aad sii qulquli. Waxaad ku dari kartaa mid ka mid ah faylka ama laba files.
3. Hadda riix il. On saarka il, kaliya arkaan il warbaahinta aad dooratay iyo guji soo socda.
4. Hadda si ay u Mudanayaasha Ahaado, waxaad dooran kartaa UDP ama caga kala ku xiran tahay xidhiidhka ka mid ah TV-ga. Oo weliba, dooro ikhtiyaarka transcoding haddii aad rabto in aad beddesho qaabka ugu video .
5. Marka aad gujisid, soo socota sheeg xarig saarka socodka qalabka aad ayaa diirada u il, haddii wax ka.
Marka la abuurayo il this Hubi in aad TV ku xiran shabakadda oo ay awoodaan in ay arkaan qalab aad ku shabakada. Hadda hubi webigu ka TV. Habka kala duwan ka soo TV inaad midba kan kale oo nooca qalab loo isticmaalo si ay u helaan internet. Si kastaba ha ahaatee, haddii wax walba waa sax waxaad awoodi doontaa inaad si ay u arkaan webigu.
Ma jiro farqi badan ka habka daaqado, oo inta badan la mid ah sida daaqadaha noqon doonaa. Si kastaba ha ahaatee, weli in aad qaadato nidaamka halkan ku sugan yihiin tallaabooyinka ay kaa caawin doontaa in warbaahinta il ka Mac in TV.
1. Launch media player VLC aad Mac oo taga si File menu iyo Stream furan.
2. suuqa kala socda, waxaad u baahan doontaa in ay doortaan faylasha aad rabto in aad sii qulquli. Waxa kale oo aad ku dari kartaa Cinwaan doorataa file doorasho Cinwaan Xamuulka.
3. Haddaba, xulo il iyo Ku qor cinwaanka ka mid ah qalabka beegsaday. Sidoo kale, dooro fursadaha transcode haddii aad rabto in aad beddesho qaabka faylka aad rabto in aad sii qulquli sida ay u qaabeynta aad TV. Marka ay dhamaato, waxaad u baahan doontaa in ku dhow Stream ku dhawaaqayay.
Hadda webigu laga heli doonaa on your DLNA shahaado TV hubiyo in si ku xiran shabakadda ayna u oggolaadaan in webigu ka network. Haddii ay suurtagal tahay isku day inaad adeegsato xiriir taliya network xawaare sare, maxaa yeelay, il iyo video tayo ku xiran xawaaraha internet ka.
Hubi in qaabka faylka waxaa taageera VLC iyo TV. Waxaad mar walba isticmaali kartaa Converter wanaagsan sida Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo video ka dibna sii qulquli in set TV aad.
> Resource > VLC > Sida loo sii qulquli From VLC in TV?